e -Visa Information
Search Myanmar Mission
ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ English ဘာသာဖြင့်စာမေးပွဲများကိစ္စ အသိပေးကြေညာခြင်း (29 January 2018)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၊ ဗုဒ္ဓဓမ္မဒီပလိုမာသင်တန်း ၀င်ခွင့်အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) အသိပေးကြေညာခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည် နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (UEHRD) ကော်မတီသို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်သည့် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းအမှတ်များနှင့် ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များသိပေးကြေညာခြင်း
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ အသိပေးကြေညာခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည် နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine - UEHRD) ကော်မတီအတွက် နိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဘဏ်များ၏ SWIFT CODE များအားသိပေးကြေညာခြင်း
Yangon International Gems & Jewellery Fair-2018
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည် နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine - UEHRD) ကော်မတီသို့ အလှူငွေများထည့်ဝင်နိုင်ရေး အတွက် စာရင်းအမှတ်များသိပေးကြေညာခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည် နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine - UEHRD) နှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးထုတ်ပြန်
မွနျမာနိုငျငံရှိပွညျသူမြား၏ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုလုပျငနျးမြားတှငျ တတျစှမျးသ၍ ပါဝငျကူညီဆောငျရှကျလိုသော ပွညျပနိုငျငံမြားရှိ မွနျမာဆေးပညာရှငျမြားနှငျ့ ဆရာဝနျကွီးမြားအနဖွေငျ့ ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနမှ အဓိကဆကျသှယျရမညျ့ ပုဂ်ဂိုလျ
နခှေငျ့သကျတမျးတိုးခွငျးနှငျ့ ပွညျပွနျဝငျခှငျ့ဗီဇာ ခှငျ့ပွုခွငျး
ပွညျထောငျစုသမ်မတ မွနျမာနိုငျငံတျော နှငျ့ အပွနျအလှနျ ဗီဇာ ကငျးလှတျခှငျ့ပွုသော နိုငျငံမြား
နှစ်သစ်အခါသမယတွင် နိဗ္ဗာန်သို့ရည်မှန်း၍ ဗုဒ္ဓသာသနာ ယုံကြည်သက်ဝင်မှု ပိုမိုရရှိစေရေး အားပေးကူညီနိုင်ပါရန်
Announcement regarding attacks in Laukkai, Shan State (6 March 2017) ( English)
Announcement of the Types of Visa, Duration and Fees (December 1, 2016)
Trade and Investment Opportunities in Myanmar
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ အသိပေးကြေညာချက်
လွှတ်တော်အသီးသီးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လစ်လပ်နေသော မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်မည့်ကိစ္စ အသိပေးကြေညာခြင်း (၁-၁၁-၂၀၁၆) (ပူးတွဲ-က) (ပူးတွဲ-ခ)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ် (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ပညာသင်နှစ်အတွက် ဒီပလိုမာ (ဗုဒ္ဓဓမ္မ) သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း (11 October 2016) (Application Form-pdf)
မြန်မာနိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားနှင့် ဗီဇာကိစ္စရပ်များအတွက် အရေးပေါ်ဆက်သွယ်နိုင်ရန် Hot Lines များ အသိပေးကြေညာခြင်း (11 July 2016)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် ၂၀၁၇-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဒီပလိုမာ (ဗုဒ္ဓဓမ္မ)သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းကိစ္စ (21 October 2015)
2014 Myanmar Census Result (Uion Report and State/Region specific reports). More detailed information and data are available at http://www.dop.gov.mm/moip/index.php?route=product%2Fcategory&path=54_49&page=1 and http://countryoffice.unfpa.org/myanmar/2015/05/26/12161/myanmar_census_2014_volume_2_a_highlights/ (29 May 2015)
Myanmar Consulate General in Los Angeles, California (May 22, 2015)
ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများသို့တစ်ဦးကျဝင်ငွေဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း(Gross National Income-GNI) တွက်ချက်မှု ဆိုင်ရာမေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားချက် (မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားချက်၊ ပြန်လည်ပေးပို့စေလိုသည့် အချက်အလက်များ) (27 January 2015)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် နိုင်ငံခြားသား အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်စနစ် (Permanent Residence System) နှင့်ပတ်သက် သည့် ကြေညာချက် (၁၉-၁၂-၂၀၁၄)
Hot Line လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးဆိုင်ရာ တယ်လီဖုန်းအမှတ်များ
Rakhine State Goverment Announcement (1/2014) 23 July 2014
Holidays for FEBRUARY
12th February 2018, Monday
19th February 2018, Monday
Eleven Days News
Myanmar Embassy, Brussels
You are here: Home Announcement
to the United Nations, New York
Address : 10 East, 77th Street, New York, NY. 10075
Tel : +1 (212) 744 1271, 744 1275
Fax : +1 (212) 744 1290
Consulate General Office
Tel : +1 (212) 744 1279
Web Developer: Myanmars.NET, Yangon, Myanmar© Copyright 2013 by Permanent Mission of the Republic of the Union of Myanmar, New York.